ROWAN HANTIDA FAA'IIDADA LEH EE CASAANKA IYO KA HORTAGGA - DAAWADA DADWEYNAHA
Ugu Weyn Ee Daawada dadweynaha
Rowan hantida faa'iidada leh ee casaanka iyo ka hortagga
Khadka cagaaran, faa'iidadiisa caafimaadka, khilaafka iyo waxyeellada suurtagalka ah ee isticmaalka ayaa lagu yaqaanay aadanaha dhawr kun oo sano.
Tifafadaha gaarka ah ee ash buurta ah waxay bixisay meel gaar ah ee daawada dhaqameed, karinta iyo kiknoolajiyada. Red Rowan waxay sii wadaa inay soo jiidato dareenka waxayna ku raaxeeysataa caan ka weyn.
Ma taqaanaa? Quraaniyadii hore ee Giriigtu waxay u sheegaan asal ahaan caleemaha dhalaalaya iyo caleemaha feathery ee ash buurta ah ee baalalka iyo dhibcaha dhiigga geedka, oo la dagaallama jinniyo, oo badbaadinaya koobkii ilaahadda dhallinyarada Hebe. Celtic Druids waxay u dhigantay riwaayad ilaa laba iyo toban sacab. Berry Rowan ("Cuntada Gods") waxay bogsiin kartaa kuwa dhaawaca ah, mid kasta oo la cuno oo la cuno wuxuu keenay sannadkii. Jarmalka-Scandinavian iyo Riwaayadda Slavic ayaa loo tixgeliyey ash buur inay noqoto gabar dhedig ah (godad Freyja gashatay silsilad ka timid buurta buuraha) sida halyeeyga Perun ee hillaaca, geedka talisman, calaamad u ah bacriminta iyo jacaylka.
Waxyaabaha kiimikada iyo qiimaha nafaqada ee khadka casaan
Faa'iidada khadka casaanka ah ayaa muddo dheer loo yaqaan. Rowan waa dhir alaab ah (waxay ku noolaan kartaa illaa 200 sano), dhammaanteedna waa (laanta, jilif, ubax, caleemo, miraha) waxay si buuxda u cufan yihiin fitamiinnada, macdanta iyo walxaha kale ee faa'iido leh.
Miraha raashinka ayaa gaar ahaan qani ku ah fitamiinada. Iyadoo ay caawinayaan, waxaad buuxin kartaa yaraanta fitamiinada xilliga jiilaalka iyo horraanta gu'ga.
Falanqaynta kiimikada ayaa muujinaysa in 100 garaam oo ash buur ah ay ku jiraan:
81 mg oo ka mid ah ascorbic acid ayaa ku dhawaad ​​laba jeer oo fitamiin C ah sida latons iyo liinta;
9 mg oo ka mid ah β-carotene, i.e., ka sarreeya noocyo badan oo basbaas;
2 mg tokopherol;
0.5 mg of nicotinic acid (fitamiin PP) - mid ka mid ah meelaha ugu horreeya ee dalagga miraha ah;
0.2 micrograms of folic acid (fitamiin B9);
1500 mcg of retinol (fitamiin A) - waxay qaadataa shanaad ka dib saliidda kalluunka, hilibka lo'da iyo beerka iyo karootada;
0.05 mg thiamine (fitamiin B1);
0.02 mg riboflavin (vitamin B2);
macdanum (331 mg), potassium (230 mg), naxaas (120 μg), fosfooraska (17 mg), sodium (10 mg), kalsiyum (2 mg), manganese (2 mg), birta (2 mg) .
Qadar badan oo fitamiin C iyo flavonols (hyperoside, astragalin, iwm.) Waxay ku jirtaa caleemaha, quercetin iyo spireoside ee ubaxa, amygdalin glycoside iyo saliida dufanka ah ee abuurka, tannins ee kortex.
Qiimaha tamarta 100 g ee berry - 50 kcal (81.1 g waa biyo, 8.9 g - carbohydrates, 0.2 g - dufan, 5.4 g - fiyuusta cuntada, iwm.). Miraha cusub ee ash buurta ah waa wax aan la cunin: joogitaanka sorbic acid (dabiiciga ah dabiiciga ah ee leh antimicrobial) wuxuu siinayaa berry qadhaadh qadhaadh ah.
Marka la soo saaro berry (sida wax soo saarka cagaarka, tinctures, iwm.), Iyo sidoo kale saamaynta hargabka, acid acid si fudud u jabo, qadhaadhku wuu baaba'ayaa, dhadhanka tartanka tartiib tartiib ah (maqaarka cagaarka ee buurta waa mid la aqbali karo oo carruurta loogu talagalay qaabka macaanka, marmalade, marwax, macaanka, iwm) .
Ma taqaanaa? Magaca sayniska ee ash buurta waa casaan - Sorbus aucuparia. Asalkiisu wuxuu ku xiran yahay kelmadda "tart" - "sor" iyo luuqada "aucupari" - "waxa shimbiraha jecel". Magacyada xariiqda "roodhada", "pea" waxay ka timaaddaa "caanaha" (lakulanka, jilbaha) sababtoo ah midabka dhalaalaya ee berry. V. Dahl ayaa sidoo kale soo saara magaca ash buurta ah "guga" - nadiif, diirran. Saaxiib ayaa la rumeeysan yahay in ash buurtu ay nadiifiso hawada, biyaha, iyo agagaarkaba, oo ka soo baxa dhamaan xun xun.
Qodobbada waxtarka leh ee gaduudka cas ee jidhka
Faafinta ballaaran ee ash buurta ah ee Eurasia iyo Waqooyiga Ameerika, joogitaanka in ka badan 100 nooc oo dhirtaas ah waxay fududeeyeen shaqada loo yaqaan 'breeders', taas oo ah noocyo cusub oo u muuqday (ballaadhan oo waaweyn, oo aan lahayn qadhaadh, malab, iwm) oo si firfircoon loogu isticmaalo karinta.
Ashkarka cas (caadiga) ee dhammaan noocyada caleemaha waa inta badan oo si firfircoon loogu isticmaalaa ujeedooyin daaweyn ah sababtoo ah sifooyin faa'iido leh:
fara badan oo fitamiinno iyo macaadin (ka hortagga fitamiin);
sifooyinka bactericidal ee phytoncides (prophylaxis iyo ka hortagga caabuqyada mindhicirka, xakameynta koritaanka fangaska);
hantida gelitaanka (ka hortagga gaaska, sameynta carbohydrates xad dhaaf ah);
joogitaanka sorbitol (ka caawinta calool-fadhiga, udubdhexaadka sonkorowga);
duriinka duriinka (daaweynta urolithiasis, caabuqa nidaamka urojinimada, ka hortagga prostatitis);
awoodda lagu yareeynayo heerka baruurta xun (sida caadiga ah cadaadiska, xoojinta maraakiibta wadnaha iyo maskaxda, ka hortagga istaroogga, weerarada wadnaha, dhibaatooyinka murugada leh);
joogitaanka potassium iyo magnesium ayaa ku kordhinaya shaqada muruqyada wadnaha;
content pectin sare (ka takooridda jirka ka mid ah birta culus, xeryahooda kiimikada halista, iwm);
jiritaanka xayawaanka E, A, PP, K, iwm. Goobta cagaaran ee guduudka ah ayaa si wanaagsan u sameysa guryaha waxtarka leh ee dumarka da 'kasta - waxay caadiyan caadada u tahay caadada, waxay ciribtirtaa ciladaha xilliga menopause, waxay kordhisaa xinjirta dhiigga, dib udhaca maqaarka, caadada hababka dheef-shiid kiimikaad, wuxuu leeyahay saameynta anti-kansarka, wuxuu u oggol yahay inuu yareeyo miisaanka xad-dhaafka, iwm.).
Sida loo soo iibsado oo loogu kaydiyo walxo cayriin ah oo cayilan
In foomka qalabka ceeriin ceeriin la beeray, ubaxyo, miraha, caleemaha iyo jilif riigsan. Dhamaantoodna hal dhinac ama mid kale ayaa leh hanti daweyn.
Nolosha sheyga ee khudradda waa hal sano (oo ah nooca berry ah - laba sano).
Diyaarinta waxaa la sameeyey:
guga hore (bilowgii socodka dheecaan) - jilif beergooyska. Ujeeddooyinka caafimaad ujeedo caafimaad oo ku haboon laanta guga sannadlaha ah. Laantu waxay jarjaraan xayawaanka, ka samee qaybta dheerka ah ee jilifka iyo kala soocida laanta. Ku qalajiyey hooska ama qalajiyaha;
Guga, ubax yaryar oo leh burooyinkeeda ayaa la jaraa. Ka dib markii la googooyaa (1 cm) oo la qalajiyey;
inta lagu jiro ubax of ash buur (bishii May), ubax waa la goostay (waa lagama maarmaan in lagu rido inflorescences) iyo jilif;
dhamaadka xagaaga (bisha Agoosto), caleemaha cagaaran ee ash buurta ah ayaa la googooyaa (diiradda fitamiin C waqtigaan sanadka waa ugu badnaan). Leaves waa in la qalajiyey ka dib goosashada.
Uruurinta ilaha ugu muhiimsan ee bogsashada guryaha ash buurta - berry ah - waa hab gaar ah oo aan haboonayn. Xaq ayaad u leedahay inaad subaxda buuraha ku soo ururiso subaxdii si qallafsan oo cad u ah. Taariikhda qashinka berri waxay ku xiran tahay sida alaabta ceeriin loo kaydin doono (cusub, la qalajiyey, la qalajiyey, iwm):
Sebtembar - Oktoobar - waa wakhtigii miro goosashada, oo ay ku xigto kaydinta cusub iyo qalajinta. Miraha waa in ay leeyihiin waqti si looga saaro ka hor dhaxan ugu horeysay, si loo badbaadiyo nafaqooyin dheeraad ah. Iska yaree caleemaha leh burushyada, iyaga oo jarjaraya. Buraashka ayaa loo xiraa kaydinta meel qabow.
Marar badan berry waa la qalajiyey (si ay u haystaan ​​ugu badnaan guryaha siyaado ah, biyaha ayaa uumi-baxaya, diirada saaridda raadadka raad raacda). Waxaa lagama maarmaan ah in la qalajiyo kabaha ku yaal hooska ama qallajiyaha, kareyso marmarka qaarkood (qalalan ilaa inta rooggu istaagayo marka la isku qabsado gacanta).
Khamriga la dhammaystiray ayaa si fiican loogu kaydin doonaa dhalooyinka daboolka leh dabool adag. Ash qoryaha qalalan ayaa saldhig u ah soo saarista budada buurta buuraha ah - waxaad u baahan tahay inaad qasto. Qalalan qalalan waxaa lagu keydiyaa iyadoon la luminin tayadeeda laba sano;
Oktoobar-Nofembar (ka dib marka uu dhaxlo ugu horeysay) - berry ayaa loo soo ururiyaa ujeedooyin culus iyo diyaarin (qadhaadh ayaa la siiyaa, si fudud looga soocaa caws). Berry oo la goostay waa la qaboojiyey, malmal la kariyey iyaga iyo tinctures diyaarisay.
Berry barafku waa weyn yahay qalajinta - saddex daqiiqo kiilo ah nooca berry ah ayaa lagu shubay biyo karkaraya oo lagu qooyay 12 saacadood biyo qabow (isbeddel ku dhaca). Ka dib markii biyo qulqulaya, qalaji ash buur ah oo ku shub 250g sonkor ah, ka dibna ka tag qolka 20 saacadood. Ka daadi juice laga soo shubay, ku dar 250g oo sonkor ah oo ku celceli habka.
Demi casiir, ku shub sharoobada kulul (si aad u daboosho dhammaan berry), kulaylka ilaa 90 darajo iyo istaagaan dabka oo idil toddoba daqiiqo. Ka dib markii berry, ka saar, qabow oo ku qalaji foornada laba jeer nus saac saacadaha 70 degrees. Ka dib markii berry ah qaboojiyey, lix saacadood si ay u qalalaan at 30 darajo.
Hab kale oo caadi ah oo lagu ilaaliyo fitamiinada - sifeynta. Waxaa jira habab badan oo ka mid ah soo saarista. Xulashada koowaad waa isticmaalka degdegga ah ee cabitaanka (aan la keydin muddo dheer): kilo ee berry dhaqday ku shub 600 garaam oo sonkor ah oo ha u istaagaan afar saacadood. Karkari oo isku kari ilaa 30 daqiiqo. Waxaad isticmaali kartaa juicer.
Doorashada labaad - diyaarinta casiir si loogu kaydiyo. Iskuday midhaha si ay u kala soocaan oo u dhaqdaan dhowr jeer, ku dar biyo iyo diirran 90 darajo. Isterobar jilicsan, qabow, xoqin iyada oo shaandho ama qaawi ee Booqday Furimaha Dagaalka hilib ah.
Iska ilaali isku dar oo karkari (si aad uga dhigtid casiir badan macaan, waxaad isku dari kartaa sonkorta sonkorta). Casiir noocan oo kale ah waxaa lagu kaydiyaa corked ee barmiil jeermis dilay.
Isticmaal daawada dadweynaha: daaweynta qashinka cas
Ashaha buurta ee buurta ah ee daawada dadweynaha ayaa muddo dheer loo isticmaalay. Casiirka, miraha, jilifka, ubaxa ee qaab cusub oo la qalajiyey, decoctions, tinctures, boomaatada, looska, iwm.
Ma taqaanaa? Awowayaasheenu waxay barteen inay isticmaalaan qadar badan oo phytoncides ku jira ash buur. Maqnaanshaha biyaha la cabo, dhowr laamood oo la jaray oo ash ash buur ah, oo ku jira biyo qabow muddo laba ilaa saddex saacadood ah, ka dhigi mid ku habboon isticmaalka. Sidoo kale, waxaad ku sameyn kartaa biyaha tuubada. Daawada caafimaadka xoolaha, caleemaha ayaa baxa xayawaanka. Beeraha, bacaha barafoobay waxaa lagu kaydiyaa caleemaha caleenta (bakteeriyada putrefactive ayaa la dilay).
Casiirka raashinka, sida berry, waxa ku jira fiitamiinada, xajistaa sifooyinka faa'iido leh, laakiin sidoo kale waxay leedahay wax isku mid ah.
Sidaa daraadeed, casiirka buurta buuraha (oo aad u fiican oo dhadhanka leh) ayaa lagula talinayaa in la qaato ka dib markaad la tashato dhakhtar.
Inta badan, iyo ugu guuleysi badan, casiir khafiif ah ayaa ka caawiya daaweynta:
cagaarshow. Daaweyntu waxay dhici kartaa oo kaliya xilliga dayrta - casiirka oo ka soo baxa miro cusub oo la jarjaray waa lagama maarmaan. Si loo yareeyo sii xumeynta cagaarshowga, cabitaanka buurta buuraha ah ayaa la sakhraamaa saddex jeer maalintii, koob biyo ku maydhay;
acidic hooseeyo, atherosclerosis, cudurka beerka. 30 daqiiqo ka hor intaadan cunin waxaad u baahan tahay inaad cabto shaaha cabitaanka khudradda;
jaahwareerka. Waxay ka caawisaa seddex jeer maalintii (ka hor inta aan cunin) kookaroolka cabitaanka caanaha, caanaha (1/3 koob) iyo qaado oo malab ah;
caloosha. Khamiir caano ah oo caano ah oo cabitaan ah 50-70 g saddex jeer maalintii (iyadoo la socda malab, saameyntu waxay noqon doontaa ka sii wanaagsan);
Cudurada dhuunta (cune xanuun, laryngitis, faryngitis, iwm.). Biyaha diirimaadka ayaa ka caawin doona biyo diirran (hal quraar) iyadoo lagu darayo cabitaanka ash buurta (1 tbsp L.);
cudurrada indhaha. Saddex jeer maalintii ka hor intaadan cunin cabitaan koob oo cabitaan ah caano.
Waa muhiim! Isticmaalka joogtada ah ee cabitaanka cagaaran wuxuu leeyahay saameyn ka-hortagga uur-qaadida, wuxuuna yareeyaa bararka xubnaha.
Shaaha Rowan ayaa si gaar ah faa'iido ugu leh beriberi, hargab iyo hargabka faafa. Qalalaha bogsashada ee kabaha casaanka ayaa si buuxda loogu keydiyaa shaaha.
Waxay leedahay saameyn ka hortag iyo daaweyn oo ku xiran halabuurka:
laga bilaabo caleemaha caleemaha - choleretic, durayo diidmo iyo tallaabo ka hortag ah. Diyaarso 300 g oo cusub ama 100 g oo caleemo qallalan ah halkii litir oo biyo ah karkaraya. Ku adkeyso 30 daqiiqo, cab cabin saddex jeer maalintii;
laga bilaabo midhaha buurta buuraha iyo duurjoogta - qufac. Waxyaabaha ay ka kooban tahay (hal qaado oo midkiiba) ku shub biyo karkaraya (laba muraayad) heerkulbeeg. Ku adkee siddeed saacadood. Si kor loogu qaado saamaynta ku dar malab iyo jeexjeex. Cabso laba ama saddex jeer maalintii hal koob oo nus ah;
qalalan beeraha cagaaran - daaweynta shubanka. 10 g of berry qalalan ku shub 200 ml oo biyo ah karkaraya iyo isku kari ilaa 15 daqiiqo. Cab maalintii laba jeer (subaxda iyo habeenkii) 50 ml.
Faytamiin ka hortag ah ayaa ka kooban dhowr waxyaabood: rinjiga, currant madow, raspberry, digo madow. Cayayaanka la burriyay ayaa lagu daraa shaaha cagaaran ama madow, sakhraan malab, macaanka raspberry, liin. Beeraha noocan oo kale ah ayaa si wacan loo dareemay, kordhiya caabbinta jidhka.
Waa muhiim! Qaadida shaaha laga soo bilaabo miro qalalan oo ash buur ah, waxaa ugu wanaagsan in la isticmaalo darmuus halkii ilmo dhir ah. Doorasho kale waa in la kariyo kulaylka yar. Tani waxay u oggolaanaysaa in kuleylku sii dheeraado, taas oo ash buurtu "siin doonaan" decoction ugu badnaan walxaha waxtar leh.
Sababaha keena burooyinka ma aha mid had iyo jeer cad. Dhakhaatiirtu waxay rumaysan yihiin in sababta ugu weyn ee keena muuqaalka burooyinka inay yihiin hoos u dhigga difaaca (sabab u ah cuntada, habaabin, xasaasiyad, iwm.).
Daaweynta burooyinka waxay la xiriirtaa qaadashada daawooyin kala duwan, taas oo had iyo jeer aan saameyn wanaagsan ku laheyn jirka (gaar ahaan carruurta). Isticmaalka daawooyinka dabiiciga ah ayaa la doorbidaa.
Waxaa jira cuntooyin kala duwan, dhammaantood waa kuwo fudud:
cabitaanka qoyan (roodhida) caanaha (ilaa ay baaba'ayaan);
xoqin berry lafaha galay bir ah, uumi maqaarka maqaarka iyo berriga ku rid masska habeenkii, ku duubi cellophane iyo faashad. Aroortii way iska baxaan. Koorsada daaweynta waa toddoba cisho;
gooyaa nooca berry cusub iyo jarjarey. Berry dhirbaaxo. Maalin kasta si aad u beddesho berry. Koorsada daaweynta waa toddoba ilaa sideed maalmood.
Isticmaalka infusions of ash cagaaran ka soo qaboobaa ayaa si ballaaran loo yaqaan.
Shardiga ugu weyn ee soo saaridda ee faleebo dawo - Ha karkarin midhaha, haddii kale hantiyooyin badan oo faa'iido leh ayaa lumaya.
Mid ka mid ah cuntada sida soo galiyey ee berry qalaylaha qalalan:
Ku shub 500 ml oo biyo ah mashiinka dhalaalay oo ku daadi 9 g (1 qaado qaado) oo ah nooca berry, oo si adag u dabool;
ku rid barkadda biyaha (20 daqiiqo);
saaro oo ku adkeyso hal saac, ka dib markaad wax cabto, cabi afar koob oo nus koob oo maalintii ah.
Bukaannada qabta bukaanka waa lagula talin karaa. Gubashada xooggan ee ash buur (on cognac, khamriga caafimaad, vodka). Sameynta fusadahan waa fududahay: litir ee vodka halkii 200 g oo ah nooca berry ah. Ashtada qashinka ah waxay ku buuxsantaa weel dhalada ah, ku shub vodka iyo gufka. Ku rid 14 maalmood meel gudcur ah (dhowr jeer dhalada waa in la ruxaa oo la soo jeestaa). Ka dib markii la xareeyo, qaado 30 g tincture saddex jeer maalintii ka hor cunto.
Ma taqaanaa? Markii ugu horeysay, buur buur buur ah oo ku taal vodka hoosta calaamada Smirnov ayaa lagu soo bandhigay 1889 bandhigyadii aduunka ee Paris. Suurtagal ma ahan in la dhajiyo tincture aad loo jecel yahay - loogu talagalay diyaarintiisa, noocyo gaar ah oo macaan oo raaxo ah Nevezhensky, si khaas ah loo soo celi gobolka gobolka Vladimir, ayaa loo isticmaalay.
Faleebo leh xanuunka caloosha
Faleebo geedka buurta ah wuxuu wax ku oolla leh kiimiko hooseeya. Wixii faleebo waxay u baahan yihiin roodhi cusub (shan koob oo ah nooca berry) iyo saddex koob oo sonkor ah. Mash caleenta, ku dar sonkorta oo ka bax siddeed saacadood diiran. Ka dib marka casiirku istaago, karkari muddo 30 daqiiqo ah oo kuleylka hooseeya, kareyso marmarka qaarkood (hubi inaadan karkarin).
Ka daadi iyo cadaadis. Si aad u aqbalto macnaha miiska saaran 4 jeer maalintii kahor cunto bil gudaheed.
Cudurka macaanka codso faleebo 400 g oo ah nooca berry ah iyo laba litir oo biyo nadiifa ah: ku shub berry dhoobo biyo, si fiican u rux oo ku adkeyso afar saacadood. Qaado faleebo shaah ah ka hor intaadan cunin (ugu dambeyn 30 daqiiqo).
Faleebo leh dhiig yaraanta
Dhiig yari si fiican u caawisaa faleebo ee caleemaha roogga. 30 g oo caleemo cusub ah ayaa lagu jajabiyaa blender, ka dibna ku shubay galaas biyo ah oo karkaraya oo lagu mudo hal saac. Qaybtu waxay u qaybsan tahay saddex qaybood waxaana la cabaa maalin kasta.
Suuxdinta asaasiga ah qashin ah ee berry rowan ee ash buur (2 tbsp L.), ku shub 400 ml oo biyo ah karkaraya, ku adkeyso saacad iyo badh ka mid ah oo qaado wareegga maalinta.
Tincture leh atherosclerosis
Iyadoo atherosclerosis waxay caawisaa isku dhafka faleebo qoryo qoyan oo qalalan (20 g), miraha karkaraya (1 tbsp. l.), caleemaha strawberry la jarjarey iyo ubaxyo marigold. Dhammaan isku dar oo ku shub biyo karkaraya (0.5 l), ku hayso qubeyska biyaha 15 daqiiqo. Ka dibna ku adkee 40 daqiiqo oo kale. Qaado saddex jeer maalintii nus nus koob ah ka hor intaadan cunin. Koorsada daaweynta waa laba illaa saddex toddobaad.
Maraq leh qufac iyo xiiqdheer
Daaweynta xiiqda iyo xiiqdheerta diyaariso maraq ah: qashinka qallalan (15 g caleemo iyo 15 g berry) ku shub biyo (200 ml), karkari oo isku kari ilaa 10 daqiiqo. Ku adkee laba saacadood, qabow iyo filter. Cab maalinkiiba laba jeer koob nus koob.
Maraq leh boogaha
Cudurkan, caawinaad wax ku ool ah ayaa decoction casiir ah (baabi'iya caloosha, adkee darbiyada xididdada dhiigga, joojiya dhiigbaxa, nabarrada bogsata). Wixii karinta maraq Waxay qaadataa kiilo ah nooca berry iyo litir biyo ah. Isteroberiga ku shubay biyo iyo dab qabsaday yar. Ka dib markii karkariyo, ka saar kuleyl, qabow iyo xoqin iyada oo shaandho. Walaaq 0.5 kg oo sonkor ah casiir iyo karkariyo. Cab saddex jeer maalintii, 100 ml.
Intaa waxaa dheer in casiir, si loogu daaweeyo ee boogaha si firfircoon codso cantaan jilicsan: Shub shan qaado oo jilif la jarjarey biyo (0.5 l), kasoobaxa iyo isku kari ilaa laba saacadood. Cab 30 ml saddex jeer maalintii kahor cuntada.
Sida loo isticmaalo koofiyadaha ee kondomoolka guriga
Isticmaalka khaanadaha casriga ah ee qurxinta alaabta guriga ayaa leh caadooyin dheer. Dadku waxay isticmaalaan bakteeriyada, bogsashada, dib u soo kabashada guryaha ash buureedka. Casiirka, saxarka miraha, graasyada waxaa si caadi ah loo isticmaalaa qaabka looska, maskadaha, cadaadiska, kiriimyada, iwm.
Natiijadu waa isla markiiba isla markiiba - xannibaadku waa la saaraa, maqaaruhu way yaraadeen, maqaarku waa yar yahay kan oo la lumiyo iftiin saliid ah, laalaabkii quruxda badanaaba waa la siman yahay, maqaarku wuxuu noqonayaa mid aad u badan. Haddii laydhka casaanku aanu keenin dareen-celin xasaasiyadeed, mana jiraan wax kale oo khaldan, waxaad si ammaan ah u isticmaali kartaa kondomoole dabiiciga ah.
Maaskaro wajiga qudaarta
При изготовлении масок для сухой и нормальной кожи главным ингредиентом является свежая рябина, используются сливочное масло, сливки, мед и др.:
растереть сливочное масло (1 ст. л.) с желтком и медом (1 ч. л.). В полученную массу добавить раздавленную в пюре рябину (2 ст. л.). Такую маску наносят на 30 минут, после чего протирают лицо салфеткой;
смешать рябиновый сок (1 ч. л.) со сливочным маслом (1 ст. л.). Codso ilaa 20 daqiiqo oo biyo raaci saabuunta linden.
Maqaar dufan leh, maaskana waa la fududeeyay:
Berry caleemaha (1 tbsp. l.) oo isku kari, ku dar kefir (2 tbsp. l) iyo liin (1 tbsp. l.). Maaskarada ayaa la dalbadaa 20 daqiiqadood waxayna ku dhaqdaa biyo kulul.
Lotion wuxuu sidoo kale u fiican yahay maqaar madow ((2 qaado), malab (1 qaado), tufaax cider ah (1 tsp), vodka (1 qaado) iyo biyo (200 ml)).
Waa muhiim! Markaad isticmaashid maaskaro, waa in maskaxda lagu hayaa in isku-darka ash buurta iyo karootada ay ka dhigi karaan maqaarka oo ay ku siiyaan harag dufan ah. Haddii aad dooneyso in aad ka baxdo nidaamka ka dib, waxay u fiicantahay inaad si ku meel gaar ah uga baxdo maaskarada noocaas ah ama samee fiidkii.
Maaskarada dareeraha ayaa faa'iido leh dhammaan noocyada maqaarka. Si fudud u diyaari:
Isku qas hal shaaha oo khudradda cagaaran, malab iyo saliidda cuntada leh ukunta beedka. Codso maaskaro 20 daqiiqo. Natiijada ugu fiican, maaskarada waxaa lagu dhejiyaa qubeyska. Muddada koorsada - 8 kulan;
mushqulo ka samaysan berudaha (2 tbsp. l) malab (1 tsp.) iyo biyo kulul (2 tsp.). U codso maqaarka ilaa 20 daqiiqo. Dusha sare waxaa lagu dabooli karaa cadaadis diiran. Muddada koorsada - 12 nidaam. Maskaxda ku hay in maaskarada tufaaxa ah uu leeyahay saameyn cad.
Tonic qurux badan - casiir khafiif ah oo la barafeeyey. Isticmaal maalinle ah oo ku jira xabo casiir leh oo leh muraayad iftiin leh ayaa dibudhin doona maqaarka oo kor u qaadaya codkeeda.
Wixii dib u soo kabashada maqaarka hoosta miro dhir ah oo la shiiday ayaa faa'iido leh. Dalbo badan oo berry ah toban daqiiqo oo biyo raaci biyo. Wax ku ool ah sida maaskareerka dabacsan iyo karootada la jeexay (oo lagu xidho 15 daqiiqo). Haddii maqaarku uu daboolan yahay, ka dibna waxaa lagu daraa cad cad oo lagu daro ash buurta.
Saameynta wanaagsan ee gabowga dhibka maqaarka waa maaskaro cabitaanka cagaaran, qasacda la jeexay, dhajiyo maraq iyo johannesört St. John (oo dhan 2 qaado). Dhammaan maadooyinka ayaa isku dhafan oo la codsadaa 20 daqiiqadood, waa la dhaqay biyo diirran.
Waxyeellada suurtagalka ah iyo ka hortagga
Inkastoo dhammaan faa'iidooyinka iyo sifooyinka dawooyinka ee sarreeya, waa inaad ka warqabtaa xaqiiqda ah inay jiraan waxyaabo kale oo ka hor imaan kara cawaaqibka xun ee isticmaalka daaweyntan.
Yaree isticmaalka ash buurta ugu yaraan waa in dadka:
iyada oo la kordhiyey acidill ee caloosha;
oo leh urolithiasis (waxaa suurtagal ah in lagu xanibo dhaqdhaqaaqa dhagaxyada);
oo leh boog gocasho ama duodenal;
ka dib marka uu kudhaco madax-dhiigfuranka / wadnaha;
oo leh cudurrada halbowlaha wadnaha;
carruurta da'doodu ka yar tahay saddex jir;
oo leh shucuur shakhsi ah ee ash buur.
Khadka cagaaran xilliga uurka iyo naas-nuujinta sidoo kale waa mid aan loo baahnayn cuntada, sababtoo ah waxay kordhisaa suurtagalnimada dhicin aan khasab ahayn, falcelin xasaasiyadeed ee ilmaha.
Qiimaynta TOP-ga ee cows-ka cows-ka
Wuxuu sifeynayaa xannaanada guriga ee kaydka
Tamaandho "Wonder of the World" - isku dar ah quruxda iyo waxqabadka, sharaxa, astaamaha, sawirrada
Goorta iyo sida loo saxo toonta jiilaalka
Mucjisooyin kala duwan oo ka yimid Hindiya - Ficus Tineke ama cufan xoqan
Wakaaladda Khayraadka Xayawaanka Qaranka ee Ukraine
Canab gudaha ah
Qaboojinta qadada ukunta
Maranta waa doorashada ugu fiican ee qurxinta guriga ama xitaa xafiiska. Caleemaha qurxinta ee waawayn waxaa lagu qurxiyey lacago caddaan ah, caddaan iyo casaan. Had iyo jeer waxay dhacdaa in fallaadhaha ay jiran yihiin, caleemuhuna ay huruud noqdaan, sababaha ay u qabaan iyo sida loola macaamilo dhibaatooyinka soo kordhaya, waxaan ka fiirsanaynaa maqaalkan. Read More
Lactic acid for bakaylaha: qiyaasta, tilmaamaha isticmaalka
Caanaha ka dib dhalmada: marka aad cabbi karto oo kala soocayso
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Daawada dadweynaha 2019